काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको गोप्य सूचना थाहा पाउन विदेशीले कतिसम्म गर्छन् भन्ने एउटा सानो उदाहरण फेला परेको छ । औपचारिक र ठूला सूचना पाउने संयन्त्र जताततै फिट भए पनि दक्षिणी छिमेकीको सानैदेखि लागेको बानी त्यतिमै सीमित छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के भन्छन्, के गर्छन् र कसलाई भेट्छन् भन्ने थाहा पाउन उनीहरूले बालुवाटारमै गजबको सूत्र बनाएका छन् ।
बालुवाटारस्थित सभामुख निवासको अगाडि रहेको विपुला हाउस त्यसरी प्रधानमन्त्रीको सूचना लिने दिने अखडा बनेको छ । र, जति ह्विस्की थप्यो, त्यति हौसिएर गोप्य कुरा खोल्दै जाने व्यक्ति हुन्, प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिलीप शर्मा । आफ्नो औकातभन्दा धेरै कुरा गर्नुपर्ने शर्माले विभिन्न काम प्रधानमन्त्रीलाई आफूले भनेर गराएको रिपोर्ट भारतीय गुप्तचर संस्था रअका नेपाल स्टेशन प्रमुख एके हल्दरलाई दिने गरेका छन् । उनी कतिसम्म भन्छन् भने– ‘सर्वेन्द्र खनाललाई आईजी मैले बूढा (प्रम) लाई भनेर बनाइदिएको हुँ, राष्ट्रपतिले त जिल्लावासी भनेर पुष्कर कार्कीका लागि अडान लिएकी थिइन् । अब न्याम्सको भीसीका लागि मलाई बूढाले वचन दिइसकेका छन् ।’
आफूहरू बियर पिउँदै र शर्मालाई ह्विस्की थप्दै हल्दरको टोलीले ‘उही तो उही तो’ भन्दै जति हौस्याउँदै जान्छ, शर्माको गफको पारो त्यति बढ्दै जान्छ । उनले यतिसम्म भन्न बाँकी राखेनन्– ‘मैले भनेको बुढाले मानेनन्, गोपाल पराजुलीलाई रहन दिएको भए गोविन्द केसी र कान्तिपुर दुवैलाई ठेगान लगाइदिन्थें । गोविन्द केसीजस्ता मानिस मरे पनि फरक पर्दैन । तर, बुढा अन्तिममा झुके ।’
बानेश्वरतिर मेडिकल पनि चलाउने शर्मा पहिला मेडिकल काउन्सिलमा पनि बसेर तर मारिसकेका व्यक्ति हुन् । डा. दिव्यासिंह शाह र शर्र्मा विगत लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न छन् । विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूले गोप्य सूचना लिन चालक, बडीगार्ड र यस्तै निकट रहने व्यक्तिलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । रअका पूर्वप्रमुख विक्रम सूदले भर्खरै प्रकाशित गरेको अनइन्डिङ ग्याम पुस्तकमा झैं कुन दिन रअका कुन अधिकारीले यस्ता भेटघाटका पोल खोलेको पढ्न पाइने हो ? अहिलेलाई त्यति प्रतीक्षाबाहेक के नै गर्न सकिन्छ र ?